Tag: maonero emakambani
Nguva Dzose Uve Kuvhara: 10 Statistics Kutyaira Kutengesa Shanduko
Svondo, May 29, 2016 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Chikwata cheMicrosoft chaisa pamwechete chena chena bepa pane zvinetswa uye kubudirira kwemasangano ekutengesa, kugadzirwa kwavo, uye kugona kuchinjisa uye kutora tekinoroji. Isu tinowanzo kusangana nemakambani ayo tout anoyevedza ekutengesa mhedzisiro kubva kune------muromo uye kutonhora kufona. Handimbopokana kuti rimwe remazano aya anoshanda - hongu ivo vanoita. Maitiro ekutengesa emakambani mazhinji haana kuchinja mukati memakore gumi. Izvo zvinosuruvarisa, nekuti chii